Al-shabaab oo shaaciyay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo ninkii isku qarxiyay Hotel Peace ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo shaaciyay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo ninkii isku qarxiyay Hotel Peace ee Muqdisho
Xarakada Al-shabaab ayaa shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo mid ka mid ah labadii qof ee ka danbeeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee maalintii Isniintii aheyd ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi bar-tilmaameedkiisu uu ahaa Hoteelka Peace ee dhinaca ku haaya xarunta Xalane ee ciidamada AMISOM, waxayna sheegeen inay ahaayeen kuwo mataano ah oo midka koowaad lagu dhuftay bar-koontarool ah oo ay joogeen ciidamada nabad-sugidda qaranka Soomaaliya.
Waxay sidoo kale sheegeen in qofka labaad uu isna gaariga ku dhuftay Hoteelka Peace oo ahaa hadafka asalka ah ee ay joogeen saraakiisha AMISOM iyo shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobey.
Ninka qaraxa fuliyay ayay Al-shabaab sheegeen inuu beel ahaan kasoo jeedo beesha Abgaal/Daa’uud laguna magacaabi jiray Maxamed Abuukar Maxamed Calasoow oo loo yaqaanay (Ahlu Sufa).
Qofkaan ayaa noqonaya shaqsigii ugu horeeysay ee kasoo jeeda beesha Daa’uud/Abgaal uu isku qarxiyo weerar ay Al-shabaab soo abaabushay, waxayna tani noqotay tan ugu hadal heynta badan ee maanta ka jirta magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, warbaahinta afka Al-shabaab ku hadasha ayaa baahiyay wareeysi lala yeeshay ninka iska qarxiyay, kahor inta uusan isqaxin, wuxuuna wareysigiisa ku sheegay inuu Alle dartii falkaasi u sameeynayo.
Si kastaba ha ahaatee, Al-shabaab oo inta badan sheegata weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay in weerarkii maanta ay ku dileen 30 qof oo ay ku jiraan saraakiil caddaan ah, taasoo aanay jirin cid arrinkaasi xaqiijisay.